Tany fambolena Ho amidy sy manofa in Malaysia
Misafidiana sokajyAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Villas Bungalows
Malaysia ((mihaino) mə-LAY-zee-ə, -⁠zhə; Malay: [məlejsiə]) dia firenena any Azia Atsimo Atsinanana. Ny monarikan'ny fanjakàna federaly dia ahitana fanjakana telo ambin'ny folo ary faritany federaly telo, nosarahin'ny Ranomasina Chine Atsimo ho faritra roa, Peninsular Malaysia ary Borneo's East East. Peninsular Malaysia mizara sisin-tany sy sisintany an-dranomasina amin'i Thailand sy ny sisintany an-dranomasina amin'i Singapore, Vietnam ary Indonezia. Mizara ny tany sy ny sisintany an-dranomasina amin'i Brunei sy Indonezia i Indonezia atsinanana ary sisintany an-dranomasina miaraka amin'i Filipina sy Vietnam. Kuala Lumpur no renivohitra ary tanàna lehibe indrindra raha i Putrajaya kosa no sezan'ny governemanta federaly. Miaraka amin'ny mponina 30 tapitrisa mahery, i Malaysia no firenena faha-44 be mponina indrindra. Ny farany farany atsimo amin'ny kaontinanta kontinanta dia any Tanjung Piai. Amin'ireo tropika dia i Indonezia dia firenena 17 megadiverse, fonenan'ireo karazan-javamaniry maro karazana. Manana ny fiandohan'ny fanjakana malaizia i Malaysia izay, nanomboka tamin'ny taonjato faha-18, dia nanjary nanaiky ho an'ny Fanjakana Britanika, niaraka tamin'ny mpiambina ny fitantanana The Straits Settlements. Natsangana ny Peninsular Malaysia ho toy ny Malayan Union tamin'ny 1946. Naorina indray i Malaya ho toy ny Federasiona Malaya tamin'ny 1948 ary nahazo ny fahaleovan-tena tamin'ny 31 Aogositra 1957. I Malaya dia niray hina tamin'ny Borneo Avaratra, Sarawak, ary Singapore tamin'ny 16 septambra 1963 ho lasa Malaysia. Tamin'ny taona 1965, voaroaka tao amin'ny federasiona i Singapaoro .Ny foko sy kolontsaina maro samihafa ny firenena. Tokony ho antsasaky ny mponina no teratany etnika, ka vitsy ny Sinoa sy Indiana ary teratany. Raha manaiky ny finoana silamo ho firenena natsangana ny firenena, ny lalàm-panorenana dia manome fahalalahana ny fivavahana amin'ny tsy Silamo. Ny governemanta dia modely akaiky amin'ny rafitra parlemantera Westminster ary miorina amin'ny lalàna iraisana ny rafitra ara-dalàna. Ny lohan'ny fanjakana dia mpanjaka voafidy, fantatra amin'ny anarana hoe Yang di-Pertuan Agong, nofidina avy amin'ny mpitondra nifandimby tamin'ny fanjakana sivy sivy isaky ny dimy taona. Ny lehiben'ny governemanta dia Praiminisitra. Taorian'ny fahaleovantena, nitombo 6,5% isan-taona isan-taona nandritra ny 50 taona ny GDP Maleziana. Ny toe-karena dia novokarina tamin'ny alàlan'ny harena voajanahary fa nitombo amin'ny sehatry ny siansa, fizahantany, varotra ary fizahan-tany ara-pitsaboana. Manana toekarena vaovao ara-indostrialy i Malaysia, ka laharana fahatelo lehibe indrindra any Azia Atsimo Atsinanana ary faha-33 lehibe indrindra eto an-tany. Mpikambana mpikambana ao amin'ny ASEAN, EAS, OIC ary mpikambana iray ao amin'ny APEC, ny Commonwealth sy ny Hetsika tsy Mifototra.
Sokajy rehetratranoTrano fonenana